Lozam-pifamoivoizana RN2 Teratany Srilankey 3 maty dobo-drano
Maty tra-drano teo noho eo ireo teratany Srilankey miiisa telo. Nivarina tany anaty hantasana misy rano ny fiara marika “Sorento” izay 39 km afaka an’i Manjakandrina, efa manakaiky iny faritra Anjiro iny.
Raha ny fanadihadiana lalina sy ny angom-baovao eo am-pelatan’ny mpitandro filamin’ny
borigadin’ny zandariamariam-pirenena miasa ao Anjiro sy ny fiheveran’ireo mponina any an-toerana
ary ireo mpampiasa lalana, vokatry ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza. Heverina fa tsy
nahafe ny lalana ireo teratany vahiny ireo tamin’ny fiolahana izay notatazan’io hantsana misy rano io
ka torana noho ny dona sy ratra nanjo azy ireo nefa dibo-drano ihany koa. Tamin’ny 7 ora marain’ny sabotsy teo no nitranga ny loza, arak any fampitam-baovaon’ny zandarin’Anjiro hatrany. Avy aty an-drenivohitra ihazo an’ny Toamasina izy ireo no tra-doza teo amin’ny toerana antsoina hoe : “Ankotrokotroka”, fokontany Ambodinifody, kaominina Anosibenifody, distrika Moramanga. Voalazan’ireo mpampiasa lalana fa mitaky hafainganam-pandeha mora io fiolahana io. Maro loatra ny lozam-pifamoivoizana tato ato. Manentana hatrany nym fanajana ny tondro-zotra eny amin’ny sisin-dalana sy tsy hirimorimo tafahoatra ny mpitandro filaminana.